အဘယ်ကြောင့် သားသမီးများကို သွန်သင်ဆုံးမပဲတင်ဖို့ အရေးကြီးပါသနည်း …? အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
News Code : 803717
ဘယ်ကြောင့် သားသမီးများကို သွန်သင်ဆုံးမပဲတင်ဖို့ အရေးကြီးပါသနည်း …?
မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး ဟဇရသ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်တော်မူလေသည်။
(( မိမိ၏ သားသမီးများကို သွန်သင်ဆုံးမပါလေ။ဧကန်မုချ အသင်အနေဖြင့် ၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းစစ်ဆေးခြင်းခံရပေမည်။ ))
(( မကောင်းသည့်သားသမီးများသည် မိဘဂုဏ်သိက္ခာကို ညိုးနွမ်းစေပါသည်။ အမွေဆက်ခံရသူများ (အထက်ဖြစ်စေ ၊အောက်ဖြစ်စေ) ကိုလည်းသိက္ခာကျ စေပေသည်။ ))
(( မတော်တဆအသင်ကြောင့် အသင်၏မိသားစုဝင်များ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းများမ ကောင်းတကာ မကောင်းဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များစာရင်းမဝင်သွားပါစေနှင့် ။ ))
ဂျဟန္နမ်မီးမှ ကင်တယ် ဖယ်ရှားပေးပါလေ …
ဤအတွက်ကြောင့်မိဘများအနေဖြင့်မိမိတို့၏သားသမီးများကိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်တွင်သာဓကပေး မိန့်တော်မူထားသည့်အတိုင်း မကောင်းမှုများမှကယ်တင် ဖယ်ရှား ပေးရန် အရေးကြီးပေသည်။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် စူရဟ် သဲဟ်ရီးမ် ၊အာယတ်တော်အမှတ် ၆ တွင် မိန့်တော်မူသည်မှာ -
((အိုအီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့ … မိမိကိုယ်မိမိနှင့်မိမိ၏အိမ်သူအိမ်သားကို (ဂျဟန္နမ်) ငရဲမီးမှ ကယ်တင်ဖယ်ရှားကြပါလေ။ ))
ဆိုလိုသည်မှာ မိမိတစ်ဦးတည်း( ဂျဟန္နမ်)ငရဲမီးမှ လွတ်မြောက်အောင်ပြုပြီး ထိုင်နေရန် မဟုတ် ကြောင်း ဖြစ် ပါသည်။ ကိုယ်တိုင်ပထမဆုံး လိုင်းတွင် နမာဇ်ဖတ်သူဖြစ်ပြီး၊ ရိုဇာထားသူ၊ကောင်းမှု ကိုသိုလ်များပြုလုပ်သူ၊ အလှူအဒါန်းနှင့်ဆဒ်ကာများကို ကောင်းကောင်းပေးဆောင်သူ၊ မွစ်သဟဗ်အလုပ်များကိုလုပ် ဆောင်သူဖြစ်လေသည်။ သို့သော်မိမိဇနီးနှင့်သားသမီးများ၊ဆွေမျိုးသားချင်းများ ကိုကြည့်လျှင် ၎င်းနှင့် မိုးနှင့်မြေကွာခြားနေလေသည်။ သူကအရှေ့ ဖက်သို့လှည့်ထားလျှင် ၎င်း၏ သားသမီးများ၊ဆွေမျိုးသား ချင်းများကအနောက်ဖက်၊သူက ဘာသာတရားကိုင်းရိုင်း မှုဆိုတဲ့ ခရီး စဉ်တွေမှာပျော်မွေ့နေလျှင် သားသမီးများ၊ဆွေမျိုးသားချင်းများက ဂိုနာဆိုတဲ့ ရေကပ်ဆိုး ထဲ မှာမျောပါနေကြ လေတယ်...အိမ်သူ အိမ်သားများ ၊နှင့်သားသမီးများကို ဂရုမပြု၊ဂရုမစိုက် ဘဲ လွတ်မြောက်ရန် မလွယ်ကူနိုင် ချေ။
အို…ဘိုင်ဆပ်…ကျွန်ုပ်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဗျား …. မိန်းမနှင့်ကလေးတွေကစကားနားကို မထောင် ဘူး လေ… ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ …? မတတ်နိုင်ဘူးဗျား …
မြတ်အလ္လာဟ်အနေဖြင့်လည်း ဤအတွက်အဖြေကို အထက်ပါအာယတ်တော်တွင် (ဂျဟန္နမ်)မီးဆို သည့်စကားလုံး ကိုသုံးတော်မူပြီး အဖြေပေးထားပါသည်။
အကြောင်းက ..အကယ်၍ အိမ်သူအိမ်သားများ၊နှင့်သားသမီးများမီးလောင်းနေရင် ..ဘယ်လို့လုပ်ပြီး ကယ်တယ်မှာလဲဆိုတာကြိုးစားမည်ဖြစ်ပါတယ်..…ထိုင်တော့ကြည့်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး … ဒီတော့ အိမ်သူအိမ်သားများ၊နှင့်သားသမီးများ သွားနေတဲ့လမ်းရဲ့အဆုံးသတ်ကတော့ (ဂျဟန္နမ်)မီးမှာလောင်း ကျွမ်းမယ်ဆိုရင်ကော် …အသင်ဘာလုပ်မှာလဲ ….?
ဘာလဲ … နှုတ်နှင့်သက်သက်ဘဲဆုံးမနေမှာလား …?
သား ရေ ..မိန်းမရေ ..သမီးရေ မီးထဲမသွားနဲ့ လောင်းသွားမယ် ..မကောင်းဘူး လိုဘဲ ပြောမှာလား?
အကယ်၍ မတော်တဆ မသိနားမလည်တဲ့ကလေးတွေသားသမီးတွေ မီးထဲ သွားလို့လောင်းကျွမ်း သွား ခဲ့ရင်ကော် မိဘတွေနှင့် ဘာမှမဆိုင်ဘူး လို့ဆိုခွင့်ရှိပါသလား…
အို..ဘိုင်ဆပ် …ဒီအိမ်သူအိမ်သားများ၊နှင့်သားသမီးများကိုယ်တိုင်မီးထဲခုန်ချရင်ကော် …ဘယ်လို လုပ်မှာလဲ?
အချစ်စစ်အချစ်မှန် ၊မေတ္တာစစ်၊မေတ္တာမှန်ရှိသည့်ဘယ်မိဘမှ မိမိအကျိုးယုတ်ရင် ယုတ်ပါစေ … သား သမီး တွေကို မီးထဲက မကယ်တင်နိုင်မခြင်း အေးအေးဆေး ဆေးနေနိုင် မည် မဟုတ်ပါ။
ဤအတွက်ကြောင့် အချစ်စစ်အချစ်မှန် ၊မေတ္တာစစ်၊မေတ္တာမှန်ရှိသည့်မိဘတွေက လောကုတ္တရာ မီးမှာလောင်းနေတဲ့သားသမီးတွေကိုကယ်ဖို့လောက၊ကဘယ်အရာကိုမျှ ဂရုမစိုက်မမြင်တော့ဘဲ အပတ်တကုတ်ကြိုးစားကယ်တင်ရင် လောကုတ္တရာ မီးထက်အဆပေါင်းများစွာကြီးသည့် ဂျဟန္နမ် မီး ကနေကော်မိမိသားသမီး များယုတ်စွ၊ဇနီး၊ခင်ပွန်း၊ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို ကယ်တင်ဖို့ နှုတ်တစ်ခု တည်းနဲ့အော်ပြီးကယ်တင်နေမည်လော?
ကျမ်းကိုး - ((သရ်ဘီယသ်သေအောင်လာသ် ကေ စိုနဟ်ရေအူဆူ ))